४० महिना सत्तामा बस्दा आँखा चिम्लेका मुद्धामा ओलीले मागे प्रधानमन्त्री देउवासँग जवाफ – Mission Khabar
४० महिना सत्तामा बस्दा आँखा चिम्लेका मुद्धामा ओलीले मागे प्रधानमन्त्री देउवासँग जवाफ
देउवासँगै प्रचण्ड र एमालेकै विरोधी कित्तामा रहेका नेताहरूप्रति खरो आलोचना
मिसन खबर २६ श्रावण २०७८, मंगलवार २३:४८
काठमाडौं । पहिलो पटक पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदलाई खासै महत्व दिएनन् । संसदीय गतिविधिहरूप्रति खासै मोह नदेखाएका ओलीले ‘अदालतले ब्यूँत्याइदिएको प्रतिनिधिसभा’ भन्ने अभिव्यक्ति बारम्बार दिए ।
प्रतिनिधिसभा ब्यूँतेपछि चालू भएका अधिवेशनमा वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिँदाबाहेक अन्य बैठकमा ओलीको बोली सुनिएन । प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिएको तीन सातापछि प्रतिनिधिसभाको रोस्टममा सोमबार झुल्किएका ओलीले आफ्नो विगतकै शैलीमा शब्द र ब्यंग्यवाण प्रहार गरेका छन् । केही व्यक्तिकेन्द्रित अनि केही मुद्दाकेन्द्रित ब्यंग्यवाणहरु यस्ता छन् । अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौता, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक, छिमेकी मुलुकहरुसँगको सम्बन्ध, सन्धि सम्झौता, लडाकु शिविरदेखि स्वास्थ्य सामग्री खरिदको छानबिनसम्मका मुद्धा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले संसदमा उठाएका छन् ।
व्यक्तिको हिसाबले ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमालेकै विरोधी कित्तामा रहेका नेताहरूप्रति खरो आलोचना गरेका छन् । सम्बोधनमा झण्डै ४० महिना सरकारको नेतृत्व गरेर हालै बाहिरिएको हेक्का ओलीले राखेनन् । बरु साढे तीन वर्ष नेतृत्वमा बस्दा आफैले आँखा चिम्लेका कतिपय मुद्दामाथी एक महिना पनि पूरा नभएको सरकारबाट एकोहोरो प्रश्नको उत्तर खोजेका थिए ।
सुकुम्बासी भूमिहिनमाथी देउवा सरकार किन कठोर ?
सरकारले सुकुम्बासी आयोग खारेज गरेर सुकुम्बासीको घाँटी सेर्ने काम गरेको दाबी गरेका ओलीले सरकार बनेको झण्डै एक महिना हुनलाग्दा समेत बधाई र धन्यवादमै सीमित रहेको भन्दै व्यंग्य गरे । सुकुम्बासी, भूमिहीनहरूको पक्षमा आफूमात्र रहेको जिकिर ओलीले संसदमा प्रस्तुत गरे ।
एमसीसी र लिम्पियाधुराको मुद्धालाई के गर्छ सरकारले ?
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले सरकारले सार्वजनिक गरेको साझा न्युनतम कार्यक्रमका बुँदा केन्द्रित प्रश्न उब्जाए । निकै पेचिलो बनेको एमसीसी सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री देउवाप्रति सम्बोधनमा पटक पटक प्रश्न गरेका ओलीले । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू एमसीसी के गर्नुहुन्छ ? नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ’ भन्दै प्रश्न गरे । पटक–पटक एमसीसीको प्रसंग उप्काएका ओलीले देउवालाई १६५ जनाको समर्थन रहेको ‘मजबुत प्रधानमन्त्री’ भन्दै व्यंग्य समेत गरे । उनले जस्केलाबाट छिरेर प्रधानमन्त्री बनेको भन्दै देउवाप्रति आक्रोश समेत पोखे । आफ्नो पालामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नक्सा जारी गरेका ओलीले अहिले त्यो भूमि फिर्ता ल्याउनेबारे देउवाको धारणा मागेका थिए । ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी फिर्ता ल्याउँछु भनेर किन भन्न सक्नुभएन ? लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक समस्या हो कि हाम्रो पवित्र अभिन्न भूभाग हो । यो समस्या हो ? गठबन्धन सरकारले हाम्रो भुभाग फिर्ता ल्याउन नसकेमा आउने चुनावबाट बहुमतसहित सिंहदरबार छिरेर भूमि फिर्ता ल्याइछाड्ने दाबी गरे ।
लडाकु शिविरको अनियमितता बारे छानबिन हुन्छ ?
प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि लडाकु शिविरमा भएको अनियमिततासम्मको प्रसंग उठाए । ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति र संस्थालाई कारबाही गर्ने भनिएको छ,’ भन्दै ओलीले अलि अगाडिदेखि छानबिन गर्नुस् है ।’विगतमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद भएको र ती सामग्री विभिन्न अस्पताल र एयरपोर्टमा नै थन्किएर प्रयोगविहीन भएको उल्लेख गर्दै तिनका बारे पनि छानबिन गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘वीर हस्पिटलमा एमआरआई मेसिन थन्किएर बसेका छन् । एयरपोर्टमा छन् । विभिन्न समयका घोटला पनि छानबिन गर्न सुझाब दिए । लडाकु शिविर, ललिता निवास, मातातिर्थको जग्गादेखि धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्रको अनियमितता गठबन्धन सरकारले गर्ने भनेको छानबिनभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न गरे ।
द्वन्द्वपीडितलाई न्याय कि सम्मान ?
वर्षौंदेखि समस्यामा रहेका द्वन्द्वपीडितहरूको प्रसंग जोडेर गठबन्धन सरकारप्रति प्रहार गरेका ओलीले शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएका प्रचण्ड र देउवाले छानेका व्यक्तिलाई आयोगमा पठाउँदा समेते किन काम नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । गठबन्धन सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई सम्मान गर्ने जिकिर गरेको प्रशंग उठाउँदै शरीरमा गोली भएकाहरूलाई न्याय दिन नसक्ने हो भने एमालेको केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीमा पुर्याइदिनुहोस्, म उपचार गरौंला’, भन्दै ब्यंग गरे ।
देउवा ,प्रचण्ड र माधव समूहप्रति आक्रोश
ओलीले सुरुमै देउवालाई परमादेशबाट बनेको भन्दै प्रहार सुरु गरेका थिए । गठबन्धनले ल्याएको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई सडकमा भेटिएको पर्चाको संज्ञा दिएका ओलीले उक्त कार्यक्रममा कांग्रेस नदेखिएको भन्दै देउवाप्रति व्यंग्य गरे । प्रचण्डले यसअघि प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफूलाई लक्षित गरेर बोलेका कुराको जवाफ पनि ओलीले दिए । दाहालले माओवादी नसिद्धिएको र आफूहरू आगो भएकाले नखेल्न चेतावनी दिएको संसदकै प्रशंग कोट्याउँदै आलीले देशमा लगाएको डढेलो आफूले निभाएको र थप डढेलो निभाउन पानी खन्याउनुपर्छ भन्नेमा जानकार रहेको भन्दै ब्यंग्य गरेका थिए ।
संसदमा गरेको सम्बोधनको अन्त्यमा ओलीले आफ्नो पार्टी भित्रको असन्तुष्ट समूहप्रति आक्रोश पोखे । ‘मेरै पार्टीका केही मान्छेहरू पाउँला र खाउँला भनेर कुदेका छन् । हिरिक्क, हिरिक्क भएका छन्,’ ‘यति त गराइसक्नुभयो, पछि त लगाइसक्नुभयो । कुदेको कुद्यै भएका छन्, स्याँ–स्याँ भएका छन् । बिहान बेलुका चाकरी बजाइरहेका छन् । मेरो दलमा अलिकति घाटा भएमा सहुँला बुझाउँला मन्त्री दिनुस्, प्लिज !’ भन्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाब दिएका थिए ।